अमेरिकामा कर्फ्यू आदेश, कारण के हो ? – Gandaki Voice
Home/विश्व/अमेरिकामा कर्फ्यू आदेश, कारण के हो ?
अमेरिकामा कर्फ्यू आदेश, कारण के हो ?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले अमेरिकी संसद भवनमा आक्रमण गरेका छन् । नोभेम्बर ३ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा डेमोकर्याटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन विजयी भएको घोषणा गर्न छलफल भइरहेका बेला ट्रम्प समर्थकहरू संसद भवनभित्र छिरेका आक्रमण गरेका हुन् ।
ट्रम्पका समर्थक अन्धाधुन्ध आक्रमणमा उत्रिएपछि प्रहरीले भीडलाई नियन्त्रणमा लिन गोली चलाएको थियो । घटनामा एक महिलाको मृत्यु भएको विवरणहरू सार्वजनिक भए पनि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।
केही प्रदर्शनकारीहरू पर्खालबाट सिनेट चेम्बरभित्र पनि पुगेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले केही समयपछि भीडलाई शान्त पार्न नेशनल गार्डलाई परिचालन गर्न आदेश दिएका छन् । उनले भीडलाई शान्त रहन पनि आग्रह गरेका छन्।
अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएपछि गार्डलाई क्यापिटल हिल पठाइएको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरीले ट्वीट गरेर त्यसको जानकारी दिएकी हुन्।
क्यापिटल भित्र भीड अनियन्त्रित र हिंस्रक भएपछि क्यापिटल हिल प्रहरीले थप सुरक्षाबल पठाउन माग गरेको थियो ।